Ku dhis diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo dusha laga farsameeyo oo ay ku xiran yihiin loox Arduino ah iyo madbacad 3D ah | Qalabka bilaashka ah
Iyada oo loox Arduino ah ama loox Raspberry ah waxaad ku dhisi kartaa qalab kasta. Shaki kuma jiro tan, laakiin ilaa maanta, in yar ayaa ah kuwa sameeya ee ku guuleystey inay dhisaan diyaarad duuliye ah oo ay saaran yihiin guddiga Arduino.
Dhallinyaro la magacaabay Nikodem Bartnik wuxuu sameeyay diyaarad duuliye ah oo guryaha lagu sameeyo, qalab duulimaad oo ay xukumaan guddiga Arduino, xaaladdan ayaa ah qaabka MPU-6050. Quadcoptero waa moodel shaqeynaya iyo waliba tusaale aan ku celcelin karno wakhti kasta.
Nikodem Bartnik wuxuu adeegsaday daabacadihiisa 3D si uu u abuuro qaab dhismeedka ay duuliye la’aanta duulaya yeelan doonto. Qaab dhismeedkan wuxuu ku daray matoorrada, matoorrada, baytari dib loo soo celin karo iyo guddiga Arduino MPU-6050. Sanduuqa MPU-6050 wuxuu mas'uul ka ahaa xakamaynta dhammaan hawlgallada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale ku xirmaan koontaroolka fog ee Bartnik uu abuuray si loo xakameeyo duulimaadka.
Nikodem Bartnik wuxuu abuuray diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo loo yaqaan 'drone' oo loo yaqaan 'drone' oo loo yaqaan 'drone' oo loo yaqaan 'drone' oo loo yaqaan 'drone' oo loo yaqaan 'Atmega chips' iyo daabacad 3D ah
Sida aad u jeeddo, waxyaabaha ay ka kooban tahay diyaaradani waa kuwo aan qaali ahayn oo si fudud loo heli karo. Iyo inbadan haddii aan gurigeena ku haysano daabacad 3D ah. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo kale uma muuqdaan kuwo aad u fudud bilaa barnaamijka. Taasi waa sababta bogga Instructables ee mashruucu uu yahay mid aad u qiimo badan.
Bartnik wuxuu ku daabacay mashruuca oo dhan gudaha bog Instructables markaa isticmaale kasta ayaa isticmaali kara tilmaamaha si uu u dhiso diyaarad duullimaad ah oo iyaga u gaar ah. Websaydhka waxaan ka heli doonnaa oo keliya software-ka iyo liiska dhammaystiran ee qaybaha laakiin sidoo kale faylasha daabacan ee aan u isticmaali karno bilaash iyo bilaash.
Mashruucu wali wuxuu ubaahan yahay horumarin badan si looga dhigo inuu u shaqeeyo sida drones xirfadlayaal ah, laakiin shaki la’aan waa mashruuc xiiso leh oo lagu daboolayo baahiyaha aasaasiga ah, taas oo ah, in la helo diyaarad duulimaad aasaasi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Ku dhis diyaarad aan duuliye lahayn oo loo yaqaan 'drone' oo loox leh oo ay ku xiran yihiin loox Arduino iyo daabacaad 3D ah
Asepeyo waxay bilaabeysaa barnaamij cilmi baaris caafimaad oo laxiriira daabacaadda 3D
PassivDom wuxuu awood u leeyahay inuu soo saaro guri daabacan 8 saacadood gudahood